सरकारको विरोध गर्दै काँग्रेस सडकमा - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
सरकारको विरोध गर्दै काँग्रेस सडकमा
८ श्रावण २०७५, मंगलवार १३:२२
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका कामकारवाहीको विरोध गर्दे काठमाडौमा प्रर्दशन गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै अनशनरत डा. केसीको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता र सरकारको पछिल्लो कामकारवाहीको विरोधमा कांग्रेसका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला कार्यसमितिले मंगलबार काठमाडौमा प्रर्दशन गरेका हुन् । उनीहरुले सरकार अधिनायवाद तर्फ उन्मुख भएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
यस्तै उनीहरुले अत्यावस्यक क्षेत्रमा कर बढाएको भन्दै फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चिकत्सा शिक्षा विधेयलाई माथेमा कार्यदलको मर्म अनुसार पास गर्न समेत उनीहरुले माग गरेका छन् । काठमाडौको माईतिघरबाट सुरु गरिएको प्रर्दशन नया बानेश्वर पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभालाई सम्बोधन गर्दे काग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले बर्तमान सरकारलाई सचेत गराउनमात्रै आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका थिए ।
कांग्रेस ललितपुरका सभापति मदन अमात्यले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको विधेयक हुबहु कार्यान्वयन गरेर डा. केसीको माग पूरा गर्न माग गर्नुभयो । कांग्रेसको मंगलबारको आन्दोलन सांकेतिक मात्रै भएको जिकिर गर्दै उहाले एक हप्ताभित्र सरकार नसच्चिए कांग्रेसले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
त्यस्तै भक्तपुर कांग्रेसका सभापति दुर्लभ थापाले सरकारको जनताविरोधी क्रियाकलापको विरोध जारी राख्ने धारणा राख्नुभयो । यस्तै, काठमाडौंका सभापति सुवजु कृष्ण बानियाँले कांग्रेसले सरकार संस्कार र सुशासनमा बसोस् भनेर सचेत पार्नका लागि आन्दोलन गरिएको बताउनुभयो । कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई ढाल्न केही गर्नै नपर्ने जिकिर गर्दै सभापति बानियाँले चुनावअघि गरेका आफ्नै बाचाहरु पूरा गर्न नसकेर सरकार ढल्ने दाबी गर्नुभयो ।